နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေးဝန်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ | NLD
Home Appointment နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေးဝန်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေးဝန်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
Posted By: mygate wayon: နိုဝငျဘာ 06, 2018 In: Appointment, State Counsellor, State Counsellor GalleryNo Comments
နေပြည်တော် နိုဝင်ဘာ ၆
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေးဝန်ကြီး H.E.Mr. Song Tao အား ယနေ့ ညနေ ၅ နာရီခွဲတွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၏နေအိမ်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
တွေ့ဆုံပွဲသို့ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အတူ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းတို့ တက်ရောက်ကြပြီး တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဝန်ကြီး နှင့်အတူမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး မစ္စတာဟုန်လျန်လည်း တက်ရောက်သည်။
ထို့နောက် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေးဝန်ကြီးအား ညစာဖြင့်တည်ခင်းဧည့်ခံသည်။
နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ တရုတျကှနျမွူနဈပါတီ နိုငျငံတကာ ဆကျဆံရေးဝနျကွီးအား လကျခံတှဆေုံ့
နပွေညျတျော နိုဝငျဘာ ၆
နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျသညျ တရုတျကှနျမွူနဈပါတီ နိုငျငံတကာ ဆကျဆံရေးဝနျကွီး H.E.Mr. Song Tao အား ယနေ့ ညနေ ၅ နာရီခှဲတှငျ နပွေညျတျောရှိ နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ၏နအေိမျ၌ လကျခံတှဆေုံ့သညျ။
တှဆေုံ့ပှဲသို့ နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျနှငျ့အတူ မန်တလေးတိုငျးဒသေကွီး ၀နျကွီးခြုပျ ဒေါကျတာဇျောမွငျ့မောငျနှငျ့ ငွိမျးခမျြးရေးကျောမရှငျဥက်ကဋ်ဌ ဒေါကျတာတငျမြိုးဝငျးတို့ တကျရောကျကွပွီး တရုတျကှနျမွူနဈပါတီ နိုငျငံတကာဆကျဆံရေးဝနျကွီး နှငျ့အတူမွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံသံအမတျကွီး မစ်စတာဟုနျလနျြလညျး တကျရောကျသညျ။
ထို့နောကျ နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျသညျ တရုတျကှနျမွူနဈပါတီ နိုငျငံတကာ ဆကျဆံရေးဝနျကွီးအား ညစာဖွငျ့တညျခငျးဧညျ့ခံသညျ။
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီး Mr. Filippo Grandi အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
မေ 24, 2019
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ထိုင်းနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး Mrs.Suphatra Srimaitreephithak အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး H.E. Mr. Teodoro L. Locsin, Jr. အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
မေ 23, 2019